Ulwakhiwo kunye nophuhliso lwendlela yemodyuli yekhamera
Ubume kunye nophuhliso lweemodyuli zekhamera Iikhamera zisetyenziswe ngokubanzi kwimveliso eyahlukeneyo ye-elektroniki, ngakumbi ukukhula ngokukhawuleza kwamashishini afana neefowuni eziphathwayo kunye neetafile, eziqhube ukukhula okukhawulezileyo kweshishini lekhamera. Kutshanje ...
Infrared thermal khamera kunye "nobushushu"
Umgaqo wokusebenza Ukukhanya kwendalo kudityaniswe ngamaza okukhanya anee-wavelengs ezahlukeneyo. Uluhlu olubonakala kwiliso lomntu yi-390-780nm. Amaza ombane amafutshane kune-390nm kwaye angaphezulu kwe-780nm awakwazi ukuviwa ngamehlo omntu. Phakathi kwawo, amaza ombane ngo ...
Isakhiwo esisiseko kunye nomgaqo wokusebenza wemodyuli yekhamera
Isakhelo esisisiseko semodyuli yekhamera I. Ubume bekhamera kunye nomgaqo osebenzayo Indawo idutyulwa ngelensi, umfanekiso ovelisiweyo uqikelelwa kwisenzisi, emva koko umfanekiso obonakalayo uguqulwa ube ngumqondiso wombane, oguqulwa ube sisigna sedijithali ...